အွန်လိုင်းဖိုင်ကူးပြောင်းခြင်း - Zapya Blog
Zapya Transfer မြန်မာဘာသာ
By dewmobile / 2021-07-02
သင့်ရဲ့ ဖိုင်မျှဝေခြင်းဝန်ဆောင်မှုက ဖိုင်များကို ပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း ကိုသာလုပ်ဆောင်ပေးတုန်းပဲလား။ အခု Zapya Transfer မှာ ဗွီဒီယိုတွေကို ကူးပြောင်းလို့ရပြီနော်။
ဗီဒီယိုတွေကို ရယူဖို့ သင့်ရဲ့ Zapya Transfer Free အကောင့် (သို့မဟုတ်) Zapya Transfer Pro အကောင့် သို့ login ဝင်လိုက်သည့်အခါ ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအင်္ဂါရပ်သည် အောက်ပါ အချက်များကို သင့်အားခွင့်ပြုထားသည် –
ဗီဒီယို Transcode လုပ်ခြင်း
Video encoding လို့လည်းခေါ်တဲ့ ဒီ option က မူရင်းဗွီဒီယိုကို အခြားဖိုင်ပုံစံ အဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖိုင်format နှင့် ဖိုင်အရွယ်အစားအကြီးဆုံးရှိသည့်နေရာ သို့ upload လုပ်တဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို storage နေရာ အကန့်အသတ်ရှိသည့် စက်ထဲသို့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်တဲ့အခါ မှာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ Zapya Transfer ၏ ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ဗီဒီယိုများကို m4v, mov, f4v, mp4, 3g2, mkv, 3gp, နှင့် avi ပုံစံများဖြင့်ကူးပြောင်းနိုင်ပါသည်။ *
ဗီဒီယို ထဲကနေ အသံပဲလိုချင်ပါသလား။ ဘယ်ဗွီဒီယိုထဲကမဆို အသံကူးယူနိုင်ပြီး၊ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ Mp3 ဖိုင်အဖြစ်သိမ်းရန် ဒီ option ကိုသုံးလိုက်ပါ။ *
အသံမပါပဲ ဗီဒီယိုသီးသန့်လိုချင်ပါသလား။ ဗွီဒီယိုကိုမူရင်းပုံစံဖြင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် ဒီ option ကိုသုံးလိုက်ပါ။ *
ဗွီဒီယိုကို ဖိုင်အရွယ်အစားသေးငယ်စေရန် နှင့် မူရင်းဖိုင်ပုံစံဖြင့်သိမ်းရန် ဒီ option ကိုသုံးလိုက်ပါ။ သင် လိုချင်တဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားကိုသာသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Zapya Transfer မှ သင်လိုချင်သောဖိုင်အရွယ်အစား နှင့် ကိုက်ညီရန် ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးကို လျော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ *
သင်ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ မူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်သည် သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ရန် နဂိုမူလ အတိုင်း ရှိနေလိမ့်မည်။ Zapya Transfer Free အကောင့်ကို အသုံးပြုသူများသည် ဤအင်္ဂါရပ်အသစ် ကို တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သည်။ ဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအင်္ဂါရပ်ကို အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုလိုပါက သင်၏ Zapya Transfer Free အကောင့် ကို Zapya Transfer Pro သို့ upgrade လုပ်လိုက်ပါ။ Zapya Transfer သည် အွန်လိုင်းဖိုင်ပြောင်းလဲခြင်းအပါအဝင် သင်၏ အွန်လိုင်းဖိုင်မျှဝေခြင်းစွမ်းရည်ကို လည်းတိုးချဲ့ထားသည်။ ယနေ့ ပဲ Zapya Transfer မှာ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသုံးလိုက်ပါ။
ကြော်ငြာတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပါသလား? Zapya ၏ VIP user အဖြစ်‌‌ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
By dewmobile / 2022-05-07
အကောင်းဆုံး အော့ဖ်လိုင်း မက်ဆေ့ချ်ပို့ APP
By dewmobile / 2022-04-22
သင်၏ကိုယ်ပိုင် “Bubble” တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ
By dewmobile / 2022-04-12
Конвертирование файлов онлайн
تحويل الملفات عبر الإنترنت
1 thought on “အွန်လိုင်းဖိုင်ကူးပြောင်းခြင်း”
Htet Hlaing Oo says:
2021-07-06 at 4:06 pm
هل سئمت من الإعلانات؟ يمكنك أن تصبح عضو VIP في Zapya!
Устали от рекламы? Станьте Zapya VIP!
ایا از تبلیغات خسته شده اید؟ به زاپیا وی ای پی ملحق شوید
Qainat on عیدالفطر مبارک
Clara Gonzalez Péres on Feliz día de las madres
Eassa Shah on عیدالفطر مبارک
Manan Khan khattar on عیدالفطر مبارک
Zapya Transfer (98)
русский язык (95)